Maitiro Ekuita Yako Email Kushambadzira Neshamwari Shamwari | Martech Zone
Maitiro Ekuita Yako Email Kushambadzira Noushamwari
Monday, May 14, 2012 Svondo, October 4, 2015 Lavon Tembere
"Gore-pamusoro-gore, kubva munaKurume 2011 kusvika Kurume 2012, email inovhura pane nharembozha yakakura 82.4 muzana," sekureva kweRedath Path mobile manhamba. Kugadzira nharembozha yeemail yako ekushambadzira kuedza haisisiri yeemhando yepamusoro emaemail; icho chinodikanwa.
Munguva pfupi yapfuura, Delivra yakaburitsa Maitiro Ekuita Yako Email Kushambadzira Neshamwari, chishandiso chinopa 2012 nharembozha, manhamba, uye mazano ekuti ungaita sei kuti yako email kushambadzira igadzirire kune vako-pa-kuenda vateereri.
Muchena anokurukura zvinhu zvitatu zvakakosha zvekubudirira kweemail email uye matekiniki anodiwa kushandisa zano rakadai.
Varipi vateereri vako vachiverenga email?
Uri kusika zvemukati zvevaverengi venhare?
Iko email yako dhizaini inoshamwaridzika?
Kuti uwane mhinduro kumibvunzo iyi uye kuona kuti maemail ari kuuya muzera renhare, dhawunirodha Maitiro Ekuita Yako Email Kushambadzira Neshamwari whitepaper.
80% yevatengi vanowana kuverenga kwekushambadzira maemail panharembozha yavo zvisiri nyore pane paPC. Uri kugadzira maemail ayo vateereri vako anokwanisa kuverenga nyore nyore uye kupindura pane yavo nhare mbozha? Kana zvisiri, zvinogona kuendeswa kumarara. Usarega izvozvo zvichiitika!
Tags: delivraEmail MarketingYeMahara neThebhu Kushambadziranharembozha emailnharembozha
Mobile Kubhadhara - Musika Muruoko Rwako
Ndatenda nekuburitsa izvi. Isu tanga tichingotaura nemutengi nhasi nezvekukosha kwenharembozha uye kuti zvakakosha sei kutora mukana pazviri padanho rekukura rinoshamisa!